फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - कालोको कुरा !
कालोको कुरा ! घिमिरे ‘मैदेली’
कालोको कुरो गर्नेबित्तिकै तपाइँ नझस्किनोस् । कालो सबै नराम्रा कहाँ हुन्छन् र ? कालोको कमाल कति छन् कति । कालो आँखामा कालो चस्मा लगाएर हिँड्नोस् स्वास्थ्यलाई फाइदै हुन्छ । कालो रङ्गको छाता ओढेर हिँड्दा तपाइँलाई बढ्ता तापबाट सुरक्षा मिल्छ । सबै रङ्गमा बलियो छ कालो । भगवान् कृष्णलाई त्यत्रा गोपिनीहरूले मन पराएका पनि कालोकै कारणले हो । जो कालो उही भगवान्को सालो त भनिएकै छ । कालो कोट, कालो चस्मा, कालो जुत्तामा जमेर हिँड्नोस् त तपाइँलाई कसले कालो भन्छ ? बरु राम्रो भन्छ । धार्मिकताको मार्मिकतामा कालो कताकता विशेष मानिएको छ । शालिग्राम कालो भएरै मानिएको हो । कृष्णजस्तै हुन पाऊँ भन्ने गोराहरू पनि कम छैनन् । तीलमध्येको कालो तील, बोकामध्येको कालो बोकोजस्ता कालाका कमाल धेरै छन् ।
शनिश्चरलाई पुज्दा त प्राय सबै काला वस्तुनै चाहिन्छन् । काला भैरवको त कुरै नगरौँ । चलाख काग र स्वरकी धनी कोइली कहाँ सेता छन् र ? काली नानीले कालो पहिरनमा कर्के नजरले तीर हान्दा कसैलाई केही त भएकै होला । गोरा छाला हुनेले त आफ्नो रुप, रङ्ग र ढङ्गसित उमङ्ग भएर गोराले नै कालोलाई ब्ल्याक व्युटी भनेको सुनिएकै छ ! खाद्यपदार्थकै कुरा गरौँ कालो ढेँडो, कालो दाल, कालो भटमास, कालो अङ्गुर, कालो जामुनो त खोजेर रोजेर खाइन्छन् । यसरी कालोको कमाल कहिरहँदा त कान्ला मुनिका कान्छा काका जुर्मुराउँदै र हुर्तुराउँदै आफ्नो डुँडे औँलो सोझ्याएर भने ः
‘हेर केटा हो, अब योखाले कालोको पालो गयो । कालाका पूजा र भुजा गर्छौ, गराउँछौ भने नेताका मन र वचनका पारा बुझेर कालै हुनेका व्यवहार हेर । सधैँ शान्ति र सद्भावका सुकिला कुरामात्र नगर । काला मन भएका नेताका कामकुरा देखेर पनि अझै काला भैरबका प्रशंसा गर्छौ ? कालाकाला मन भएका नेता चिनेर व्यवहार गर ।’ भन्दै आफ्ना व्यङग्यात्मक प्रस्तुति यसरी पस्कन थाले ।
‘अब त कालो धन्दा, कालो कमाइ, कालो व्यवहार, कालो बजार कालो व्यापारका कालाले कालजमाना जानिसके ! कालोकै कारणले रोडपति रातारात करोडपति भैसके । कुन जमानामा छौ ? केको कालो शालिग्राम भन्छौ ? सेतै शालिग्राम पुज ! कालो रातमा कालो धन्दा गरेर उज्यालो दिनमा कालो सिसा राखेको कालो कारमा हिड्न पाइने भएकाले मान्छे काल प्रभावित होइन, कालो प्रभावित भएको छ । त्यसै भएर मान्छे उज्यालो दिनमा भन्दा कालो रातमा कालो कर्तुत गरिरहेछ ! काला मन भएकाहरूका कारणले दिन पनि कालो भैरहेछ । काला विचार भएका विदेशीका कालो भावनाले मुलुक कालचक्रमा घुमिरहेछ । चुनाब भन्दै तनाब गर्दै राजनीति चलिरहेछ ।
कालो बजारले कालाव्यापारी धनी भैरहेका छन् । कालालाई पुज्न कालै मन कालै धन भए हुने रहेछ । वास्तबमा संसारका सप्तरङ्गी रूप आकारलाई मान्छेले बिर्सने भैसक्यो । कालो र सेतो कै मात्र चर्चा छ । समय परिस्थितिलाई आड पारेर कालान्तरमा कालो व्यवहारतिरै मान्छे तन्किरहेको देखिन्छ । अल्छीहरूलाई पनि कालो रात कै शरणमा पसारिई रहन मन लाग्ने रहेछ । उता अरू निदाएका समयमा सुटुक्क उठेर कसैलाई समाउन र केही कमाउन पनि कालो रात नै प्रयोगमा आएको देखिन्छ । सुरक्षा कर्मीलाई पनि कुनै राहतका काम गर्न कालो रातले गर्दा असफल भएका हौँ भन्न पनि मिलिरहेको छ । राती सडक किनारामा बलिरहेका चीम फुटाई हिँड्ने पामर पुस्ताले पनि आफ्ना मत कालोतिरै प्रयोग गरिरहेको देखेका छैनौ ? सबैतिरबाट कालोले ढाकेपछि एकदिन त्यस्तो कालो रात आउँछ । त्यसपछि कहिल्यै दिन आउँदैन’ ।
काकाका कुरा सुन्दा त कताकता हाम्रा नेताका कामकुरा, दिनहुँ यसरी महगिएका रासन, नेताले मरिहत्य हालेको आसन, काला मन हुनेका भाषणले कतै छिटै कलीलाई बदली सत्ययुग ल्याउन नेताले यमराजसित साँठगाँठ गरेको कालो डिजाइन त होइन यो ? सबैलाई चेतना भया ।